Laacibka khadka dhexe ee Arsenal, Lucas Torreira oo shaaca ka qaaday Kooxda uu ku riyoonayo inuu ku biiro – Gool FM
(London) 31 Maajo 2020. Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Arsenal, Lucas Torreira ayaa shaaca ka qaaday inuu ku riyoonayo inuu awoodo inuu matalo naadiga Boca Juniors mustaqbalka dhow.
Torreira ayaa ku dhow inuu dhammeystiro xilli ciyaareedkiisii labaad ee garoonka Emirates Stadium, waxaa wali sii jiraya wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan mustaqbalka xiddiga heerka caalami ee dalka Uruguay.
Inkasta oo la soo jeediyay in 24-sano jirkaan uu ku laaban karo horyaalka Serie A, haddana xiddigan ayaa sheegay in uu doonayo inuu mustaqbalkiisa ciyaareed ka sii wato kooxda sare ee dalka Argentina.
Isaga oo la hadlaya Fox Sports Argentina, Torreira wuxuu yidhi: “Waxaan sawiranayaa habeenkii Copa Libertadores anigoo ku sugan Bambonera oo xiran maaliyada Boca,
“Hadda Madaxayga waxaa ku jira Yurub, waxaanan joogay inyar, laakiin waxaan leeyahay hamigaas iyo riyadeyda ah inaan aado Boca, kaliya ma’ahan inaan fariisto, laakiin waa inaan tartamo oo aan dareemo waxa ay Boca ay Adduunka ka tahay.”
“Qoyskeygu waa taageereyaal kubadda cagta ah, haddii aan nahay Uruguay waxaan wax badan daawannaa kubada cagta Argentina, waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan Koonfurta Ameerika, aadna u xamaasad badan, marka laga soo bilaabo yaraanteyda, waxaan jeclaa inaan u dheelo kooxda Boca.”
Torreira ayaa wali gacanta ku haysta saddex sano oo uga harsan qandaraaska uu kula jooga kooxda Gunners.
Lucas Torreira ayaa kooxda kubadda cagta Arsenal wuxuu ku soo biiray sanadkii 2018-kii, isagoo kooxdan u saftay 83 kulan tartammada oo dhan, kaliyana waxa uu u dhaliyay 4 gool.